Sacuudiga oo ka hadlay Maraakiibtiisa la wareeray! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga oo ka hadlay Maraakiibtiisa la wareeray!
Sacuudiga oo ka hadlay Maraakiibtiisa la wareeray!
May 14, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Wasiirka Tamarta ee Boqortooyada Sacuudiga Khalid al-Falih ayaa sheegay in mid kamid ah maraakiibta la weeraray uu dalkooda usoo socday si uu batrool ugu qaado dalka Maraykanka, weerarkan ayaa la sheegay inuu Axadii ka dhacay nawaaxiga xeebta Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta.
Dowlada Imaaraadka Carabta oo Axadii warkan faafisay ayaa sheegtay in afar markab la damcay in la burburiyo, balse illa iyo hada way diideen inay wax faah faahin ah ka bixiyaan sida ay u dhaceen weeraradan iyo waliba cida falkan ka danbeysa, arrintan ayaa abuurtay shaki weyn oo la gelinayo in warkan looga gol leeyahay ololaha xulafada Sacuudiga ee ka dhanka ah Iran oo ay horey u sheegeen inay khatar ku tahay amnigooda.
Sida Imaaraatiga uu sheegay maraakiibta la weeraray ayaa kala ahaa labada markab ee laga leeyahay Sacuudiga Amjad iyo Al Marzoqah, oo qaada shidaalka waxaana leh shirkada Sacuudiga ee Bahri. Labada markab ee kale ayaa ahaa mid laga leeyahay Imaaraatiga iyo mid laga leeyahay dalka Norway.
Dhacdadan ayaa lagu soo beegay maalmo kadib markii Maraykanka uu sheegay inuu isha ku hayo ciidamada Iran iyo xulafadooda bariga dhexe inay wadaan weeraro ka dhan ah xulafada Maraykanka ee Khaliijka, isla markaana ku goodiyey inay tilaabo militari ka qaadi doonaan dalka Iran hadii uu khal khal geliyo amniga wadamada Bariga Dhexe.
Maraykanka ayaa xiligan ciidamo badan oo ay wehliyaan Diyaaradaha wax duqeeya iyo Maraakiibta dagaalka kusii daabulaya bariga dhexe, isagoo sheegay in tilaabadaasi looga hortagayo khatarta uga imaaneysa Iran, waa siduu sheegay Lataliyaha Amniga ee Madaxweynaha Maraykanka John Bolton.